Google Maps Archives - SmartMe
Archives tag: google maps
Dom » Entina notsongaina miaraka amin'ny "google maps"
Ny fitsangatsanganana dia mety ho fialan-tsiny lehibe hanaovana zavatra tsara ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy hanohanana ireo mpandraharaha ao amin'ilay faritra. Dingana vitsivitsy an'ohatra fotsiny no ilaina - ireo mandeha an-tongotra sy ireo ao amin'ny fampiharana Google Maps, hanavao ...
Google Assistant miaraka amin'ny maody mpamily!
Mpanampy Google, Sarintany google
Rehefa afaka herintaona niandrasana dia tonga ihany ny endri-javatra manan-danja amin'ny Google Assistant. Tamin'ny taona 2019, Google dia nampiditra ilay endri-javatra nesorina, izay nanomboka nipoitra tamin'ny telefaona voafantina ihany. Na mpanamory fiaramanidina fotsiny io na efa ...
Nahazo endrika vaovao ho an'ny mpamily i Google Maps!
Google, Sarintany google
Saingy nampitomboinay ireo sarintany Google ireo! Miala tsiny aho milaza fa ny sarintanin'i Apple dia tsy mahazo vovoka akory ... Fa avelao ny fandresena tsara kokoa;) Ary ny tsara kokoa dia naneho iray vaovao ...
Haneho anao i Google raha misy tranga Covid marobe any amin'ny faritra itondranao azy
Tsy haiko raha fantatrao, fa mieritreritra izao tontolo izao fa hifarana amin'ny 31.12.2020 Desambra 2020 ny Areti-mandringana. Hakatonay ny taona "mahafinaritra" XNUMX sy ny tsy ampoizina. Google anefa tsy mino an'io ary ...
Niverina tao amin'ny Apple Watch i Google Maps
apple watch, Sarintany google
3 taona. Io no fotoana nanasaraka ny Google Maps tamin'ny tompon'ny Apple Watch. Ny fampidirana voalohany dia niseho tamin'ny 2015, saingy nanjavona tamin'ny taona 2017. Google dia nilaza fotsiny ilay enigmatika "hiverina aho" ary niverina izy io. Taona maro ...
Manakaiky kokoa ny fivezivezena ivelany amin'ny Android Auto!
Saingy ireo rafitra ao anaty fiara ireo dia manana vaovao be tato ho ato! Ary tsara izany, satria tsy tianay ny tsy firaharahana :) Ny kinova farany an'ny Android Auto dia mampiseho fa afaka miandry ny endri-javatra nandrasana hatry ny ela isika, izany hoe ny fivezivezena ivelany. CarPlay dia manana ...
Google Maps miaraka amin'ny maody maizimaizina eo akaiky eo ihany. Manana sary izahay!
Dark Mode dia saika na aiza na aiza ankehitriny. Ny fampiharana misimisy kokoa dia manolotra fanampiana ho azy, ary tsy ho ela dia hanampy ireo ny sarintany malaza indrindra eran'izao tontolo izao, izany hoe Google Maps. Ny iray amin'ireo mpamorona, Alessandro Paluzzi, dia nahita tao amin'ilay kaody ny mety hamadihana ny ...
Google Maps miaraka amin'ny zava-baovao hafa
3 Septambra 2020
Saingy ity Google ity dia namolavola ny saritany tato ho ato. Miseho ara-bakiteny isan-kerinandro ny vokatra vaovao. Ny farany dia manampy jiro any amin'ny tanàna lehibe, izay tena ilainao tokoa. Momba ny fampiharana jiro fifamoivoizana amin'ny sari-tany ...
Google Maps dia mahazo fanavaozana lehibe! Ny antsipiriany misimisy momba ny terrain sy ny mpandeha an-tongotra.
19 Aogositra 2020
Taorian'ny 15 taona (mandra-pahoviana no hisidina!), Ny Google sarintany dia hahazo fanavaozana lehibe momba ny terrain terrain sy ny incl. fiampitana mpandeha an-tongotra. Vaovao ho avy! Tiako ny Google Maps, tena tiako izany. Mazava ho azy fa izany dia fitiavana henjana. Google Maps miaraka amin'ny ...
Google Maps ankehitriny manana anjara asa lehibe. Ho tonga ny jiro fifamoivoizana!
8 Jolay 2020
Ny Google Maps dia mpitarika mazava rehefa miresaka fangatahana navigateur. Tsy midika anefa ny mpitarika fa manana ny asany ilaina avokoa izy ireo. Mandraka ankehitriny, ny iray amin'izy ireo dia tsy hita afa-tsy ao amin'ny sari-tanin'i Apple. Izany dia momba ny fanamoriana ...